क्रिसमस चाँडै आउँदैछ। यो दिन नयाँ सालको बधाई दिन मात्र होईन, तर एक दिन जब सबैले एक अर्कालाई उपहार दिन्छन् र आपसी चासो व्यक्त गर्दछन्। क्रिष्टमस सीमित संस्करणहरू विभिन्न व्यवसायहरूको अनुसरण गर्नेछन्। तपाईं यो ठूलो मौका कसरी गुमाउन सक्नुहुन्छ?
क्रिसमस उपहारहरू, आश्चर्यको अर्थ, अद्वितीय। धेरै ब्रान्डले यस अवसरलाई विभिन्न क्रिसमस क्षणहरू रूपरेखा बनाउन प्रयोग गर्दछ जबकि प्याकेजिंगमा रचनात्मक डिजाइनहरू। यहाँ केहि क्रिसमस प्याकेजि are छन् जुन केटीहरूले मन पराउँछन्, र हुनसक्छ तपाईलाई प्रेरणा दिन सक्छन्।
स्टारबक्सले धेरै बर्षदेखि प्याकेजि marketing मार्केटिंग खेलिरहेको छ, र यो क्रिसमस कुनै अपवाद छैन।
२०२० मा, स्टारबक्सले तीन क्रिसमस पेयहरू सुरू गरे, टोफी हेजलनाट लाट्टे, लाभा ब्ल्याक मोचा र फ्लाइing गोल्ड क्रिसमस टी लाट्टे।
यस बर्षको क्रिसमस मगले स्नोफ्लेक्स, ताराहरू, र आतिशबाजी डिजाइनमा समाहित गर्दछ, जसले क्रिसमसको वातावरण र बाल्यावस्थाले पूर्ण बनाउँछ। यस्तो ताजा र उपयुक्त कपको साथ, सबैजना यसलाई मन पराउँछन्।
थप रूपमा, स्टारबक्सले पेरीफेरल उत्पादनहरू जस्तै किचेन, क्रिसमस पेन्डन्ट्स, क्रिसमस पेस्ट्रीहरू, इत्यादिको शृंखला पनि शुरू गर्‍यो, मानिसका विविध आवश्यकताहरू पूरा गर्न।
स्टारबक्स प्याकेजिंगमा परिवर्तनहरूले क्रिसमसको लागि व्यक्तिको अपेक्षाहरू र प्रयोगकर्ता परिचय बढेको छ। यो विश्वास गरिन्छ कि स्टारबक्सको डिसेम्बर कारोबारले यस प्याकेजि ofको मार्केटिंग मूल्य देखाउँदछ।
२. सेतो प्रेमी
शिरोइ कोइबिटो यसको रोमान्टिक अर्थको कारण प्रसिद्ध छ, र क्रिसमसमा, यसले विषयवस्तुको रूपमा रातो छान्छ र बक्समा क्रिसमस कार्निवल दृश्य चित्रित गर्दछ। आश्चर्यजनक कुरा के छ भने, कुकी प्याकेजिंग ब्याग पनि विशेष क्रिसमस संस्करण हो। यो उपहार सान्ता क्लाउजबाट आएको जस्तो देखिन्छ।
एम एंड एमको प्याकेजि always जहिले पनि हास्यास्पद हुन्छ, र यस वर्ष क्रिसमस मनाउन, एम एंड एमको परिवारले सान्ता टोपी टाउकोमा राख्यो।
क्रिसमस केवल छुट्टी मात्र हो, तर हरेक ब्रान्डको विज्ञापन गर्नको लागि उत्तम समय पनि हो। यस अवसरको लागि प्याकेजिले केवल ब्यापारको फैशनलाई प्रतिबिम्बित गर्न सक्दैन, साथै ग्राहकलाई व्यापारको ईमानदारी पनि प्रकट गर्दछ, ग्राहकको पहिचानको भावना बढाउँदछ।
केही व्यक्तिहरू सँधै भन्छन् कि ठूलो ब्रान्डले मात्र प्रमोशनको लागि परिस्थितिको फाइदा लिन आवश्यक छ। वास्तवमा, चाडहरू साना ब्रान्डको प्रमोशनको लागि उत्तम समय हो। आजकल, राम्रो प्रचारको साथ केवल राम्रो उत्पादनहरूले गुणकको भूमिका खेल्न सक्छ। Beyin प्याकिंग तपाईंलाई राम्रो गुणवत्ता र सेवाको साथ व्यक्तिगत आवश्यकताहरू पूरा गर्न विभिन्न प्रकारका प्याकेजिंग बैग डिजाइन र उत्पादन सेवाहरू प्रदान गर्न सक्दछ।
यदि तपाईं क्रिसमस समात्नुभएको छैन भने, त्यसो भए नयाँ वर्ष यो उत्तम पोइन्ट नछुटाउनुहोस्।